How to download files with PayWithATweet? ~ YGNBlogger
20:56 How-to? No comments
ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပိုစ့်တွေထဲက download link တွေကို PayWithATweet နဲ့ချိတ်ပေးထားပါတယ်။ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေမယ့်၊ ခင်ဗျားတို့မှာ Facebook (သို့မဟုတ်) Twitter အကောင့်ရှိရင်တော့ download ဆွဲရတာအဆင်ပြေလှပါတယ်ဗျာ။ လုပ်နည်းကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါ။ မသိတဲ့သူတွေအတွက် အဓိက ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
ဥပမာ download link က http://www.paywithatweet.com/pay/?id=9f2db9c1ff3634501e3bab98e40d0e64 ပေါ့။ ခင်ဗျားတို့စမ်းကြည့်ပါ။ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်က ဒါကိုပဲသုံးသွားမှာပါ။ ခုကတော့ ၂ခုပဲရှိသေးတယ်။
ခင်ဗျားတို့ click လိုက်တာနဲ့ ဒီစာမျက်နှာလေးတက်လာပါမယ်ဗျာ။ Sign in with Twitter (သို့မဟုတ်) Connect with Facebook ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Twitter မကိုင်တတ်တဲ့အတွက် Connect with Facebook ကို click လိုက်ပါတယ်။ သိရတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Twitter အသုံးနည်းတယ်။ ခဏစောင့်ပါ။
ပြီးတော့ ဒီစာမျက်နှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Post on Facebook ကို click လိုက်ပါ။
နောက်ထပ် small tab လေးပေါ်လာပါမယ်။ Write something... မှာရေးချင်တာရေးပြီး Share Link ကိုကလစ်လိုက်ပါဗျာ။
ပြီးတာနဲ့ အဲ့ small tab ကအလိုလိုပိတ်သွားပါမယ်။ ခင်ဗျားတို့မပိတ်ပါနဲ့။ ပြီးရင် Download Now ကို click ပါ။
Download page ထဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကဲ။ ခင်ဗျားတို့အောင်မြင်ပြီ၊ ကျန်တာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆက်လုပ်စေ။ :)
မရရင် comment နဲ့မေးပါ။
အဆင်ပြေပါစေ။ Pyae Phyo